Ahoana ny fomba hiarovana ny kaontiko amin'ny Twitter? ▷ ➡️ mpanaraka ▷ ➡️
Enga anie 12, 2021 0 fanehoan-kevitra 741
Ilay mpampiasa, nanamarina indray mandeha fa manana ny kaonty Twitter-ny voaroaka ny fiarovana anao, soso-kevitra ianao handray ireto fepetra manaraka ireto mba hiarovana ny kaontinao: Ario ireo bitsika tsy ilaina izay navoaka raha toa ka nandefitra ny filaminana.
Diniho ihany koa ny solosainao mba hahitana sary an-tsaina viriosy sy malware, apetaho amin'ny rindrambaiko sy ny rindranasa misy anao ny patch patch, ampiasao matetika ny teny miafina mahery vaika vaovao, diniho ny safidy fampiasana verification login.
En fanamarinana fidirana, azon'ny Mpampiasa atao ny mampiditra fanamarinana fanindroany hahazoana antoka fa izy irery ihany no afaka miditra amin'ny kaonty Twitter-ny fa tsy ny antoko fahatelo, miaraka amin'ny fikasana tsy salama hanimba.
Fanararaotana an-tserasera amin'ny sehatra Twitter
Toe-javatra virtoaly maro no mety hitranga ao amin'ny tambajotra sosialy Twitter; toy ny, ohatra: Fanararaotana an-tserasera. Misy ireo mpampiasa Twitter izay Fanararaotana an-tserasera; Raha mahafantatra olona marefo ny mpampiasa dia afaka manampy azy izy amin'ny alàlan'ny firesahana ireto toro-hevitra manaraka atolotry ny Twitter ireto:
Ny mpampiasa dia tsy maintsy manandrana fantaro ny toe-javatra, mihaino anao tsara ary mandray am-po ny toe-javatra misy anao; Asaivo mitady fanampiana matihanina ilay olona: mpitsabo, mpisolovava, polisy na olona atokisana hafa, izay manana paikady hitarika azy ireo sy hanatsara azy ireo ara-pientanam-po.
Amin'ny maha mpijery, ny Mpampiasa dia manana safidy tsy hiraharaha ny Fanararaotana an-tserasera sy mitady hiaro ilay olona voakasik'izany, manohana azy ireo amin'ny fihetsem-pony; farany, tatero ao amin'ny Twitter ny atiny manaraka ny torolàlana eo amin'ny sehatra Twitter.
BLOCK SY TSY MISY FAHAMARINANA TWITTER ONLINE
Ny fifandraisana amin'ny olona marobe dia mety ho traikefa manankarena; fa manohana ny tenany ho loharanon'ny fahasosorana sy tsy fifankahazoan-kevitra raha tsy tsikaritra ny tontolon'ny resaka.
Rehefa mijery ny Mpampiasa a Bitsika manafintohina, soso-kevitra ny handinihanao ny resaka, diniho tsara ny sahan'ny sioka, izay fohy ary mety hadika vilana ny fikasan'ny mpanoratra; Valio ihany koa ny Tweet mba hanatevin-daharana ilay resaka ary hampita ny ahiahinao.
Ny mpampiasa dia manana ny safidiny eo amin'ny sehatra Twitter hanakanana sy tsy hiraharaha ny kaonty iray ho an'ireo sioka manafintohina azy. Rehefa manakana mpampiasa ianao dia tsy mahazo fampahalalana avy aminy; Tsy ho hitanao koa izany amin'ny fifampiresahanao. Manoro hevitra aho mba tsy hiraharaha.
Mahalana ny mpampiasa no mila Mifandraisa Twitter ho an'ny vahaolana amin'ny olana rehetra, satria mampanantena anao ny fitaovana, torolàlana, safidy ary torolàlana rehetra hamakivaky ny tamba-jotra miaraka am-piadan-tsaina ary hankafy azy tanteraka ny sehatra Twitter.
Na izany aza, misy fotoana tsy ahafahan'ny Mpampiasa irery ihany mamaha olana izay manimba anao amin'ny tambajotra sosialy ary mila Mifandray amin'ny Twitter ianao hahazoana ny fanampiana ilaina avy amin'ireo manam-pahaizana matihanina
Manolotra ny mpampiasa azy ny Twitter Ivotoerana fanampiana hita ao amin'ny faritra iray amin'ny tranokalanao; Eto izy io dia manazava tsikelikely ny hetsika tsirairay mila ataon'ny Mpampiasa hamahana ireo olana samihafa izay manavesatra azy amin'ny fampiasana ny Twitter.
1 Fanararaotana an-tserasera amin'ny sehatra Twitter
2 BLOCK SY TSY MISY FAHAMARINANA TWITTER ONLINE
3 Mifandraisa Twitter